एकता दिवस : सरकारले किन मनाएन ?
काठमाडौं, २७ पुस । धेरैलाई लागेको थियो, आज सरकारले सार्बजनिक बिदा देला र एकता दिवस मनाउला ! तर, जनअपेक्षा पुरा भएन । सरकारले न सार्बजनिक बिदाको घोषणा गर्यो नत, एकता दिवस नै मनायो । यद्यपी, जनताले भने राष्ट्रिय एकता दिवस मनाए ।
भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी केहि महिनाअघि नेपाल भ्रमणमा आउँदा सार्बजनिक बिदा दिने तर, नेपाललाई एकताको सुत्रमा बाँध्ने पृथ्वीनारायण शाह जन्मेको दिन भने बिदा नदिने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सरकारको चर्को आलोचना समेत भयो । राजतन्त्र नरुचाउनेहरुले समेत पूर्वराजा पृथ्वीनारायण शाहको खुलेर प्रशंसा गरे ।
सरकारले एकता दिवस नमनाएपनि सत्तारुढ दलकै कार्यकर्ताले एकता दिवस मनाउनुपर्ने भावसहितका अभिव्यक्ति सार्बजनिक गरे । राष्ट्रिय विभुति भन्ने, राष्ट्रनिर्माता मान्ने तर, जन्मदिन नमनाउने कुराको कतै मेल नखाएको र शाहको राष्ट्रप्रतिको योगदानलाई अवमूल्यन गरिएको उनीहरुको आरोप थियो । यद्यपी, केहिले शाहलाई सामन्तवादी शासक भनेर बिरोध पनि गरे ।
पूर्वराजा पृथ्वीनाराण शाहको नाम नसुन्ने नेपाली सायदै होलान् । उनैले बाईसे, चौबिसे राज्यलाई एकीकरण गरेर हालको नेपाल बनाएको इतिहास पनि सबैसामु छर्लङ्गै छ । थाहै नपाएका दिवस मनाइनु तर, सबैलाई ज्ञान भएको नमनाउनुका पछाडि धेरै कारण देखिन्छन् ।
कम्युनिष्टको नेतृत्वमा सरकार
अहिले सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेका छन् । उनकै नेतृत्वमा राजतन्त्र अन्त्यको निम्ति जनयुद्ध भएको थियो । जनयुद्धमा १७ हजार भन्दा बलिदान दिएका थिए । पूर्वराजा जन्मेको दिनलाई दिवसका रुपमा मानेर सार्वजनिक बिदा दिँदा राजतन्त्रबिरोधी खेमाको भावनामा ठेस पुग्थ्यो । त्यसैले, सरकारले दिवस मनाएन । सार्बजनिक बिदा दिएन ।
यतिबेला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको चलखेल बढेको छ । उनले एकै महिनामा दुईवटा विवादित विज्ञप्ती निकालिसकेका छन् । त्यतिमात्र होइन, राजावादी शक्तिहरु एकतावद्ध भईरहेका छन् । पृथ्वीनारायण शाह पनि शाहवंशीय पूर्व राजा नै भएकोले राजसंस्थाप्रतिको सहानुभुति बढ्ने सम्भावनाले बिदा नदिइएको हो ।
पृथ्वीनारायण शाह बि.स. १७७९ मा (२९५बर्षअघि) जन्मिएका हुन् । तत्कालिन समयमा उनले भौगोलिक एकता त गरे तर, एकताको नाममा केहि जातिमाथि पिडा पनि दिएका थिए । उनी निरंकुश र सामन्ति पाराका हुनाले पनि सर्वमान्य बनेनन् ।
बजेट वितरणमुखी भएको आरोप
प्रदेश नं ५ : बजेटमा विपक्षी प्रदेशसभा सदस्यको असहमति
मलेखु र बैरेनी अन्धकारमय
गाडीको ठक्करबाट चौधरीको मृत्यु
प्रदेश नं ७ : बजेट माथि छलफल शुरु
खेलकुद, प्रदेश, प्रदेश ७
प्रदेश ७ मा खेलकूदका लागि २७ करोड ३४ लाख बजेट
म्याग्दीमा सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन शुरु
प्रहरीमा महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण दिने तयारी : मुख्यमन्त्री राउत
यन्त्रमा च्यापिएर लक्ष्मणको मृत्यु
प्रदेश ५ को बजेटः २८ अर्ब ९ करोड, सडक विस्तार प्राथमिकतामा
प्रदेश, प्रदेश ६, मुख्य समाचार
कर्णाली प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा